Manchester United Oo Diyaarineysa 61m Si Ay Real Madrid Kaga Adkaato Jules Kounde
HomeHoryaalka IngiriiskaManchester United oo diyaarineysa 61m si ay Real Madrid kaga adkaato Jules Kounde
February 17, 2021 Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Spain, Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha Maanta 0
Manchester United ayaa lagu soo waramayaa in ay diyaarineyso € 70m (£ 60m) si ay ugu guuleysato tartanka daafaca Jules Kounde ee Sevilla uguna gaaracdo Real Madrid .
Red Devils ayaa la rumeysan yahay inay raadineyso daafac dhexe oo cusub waxayna Kounde ka dhigtay bartilmaameedkeeda koowaad ka hor suuqa xagaaga.
Si kastaba ha noqotee, United ayaa la filayaa inay tartan adag kala kulmaan kooxo kale oo badan, iyadoo kooxda reer Spain ee Madrid ay sidoo kale sheegtay inay dooneyso inay lasoo saxiixato laacibka reer France ee 21-jirada ka hooseeya.
Sida laga soo xigtay wargeyska Isbaanishka La Razon , kooxda Ole Gunnar Solskjaer ayaa loo arkaa kuwa ugu cadcad saxiixa Kounde maadaama ay diyaar u yihiin inay la kulmaan qiimeynta Sevilla.
Madrid ayaa sida muuqata ku qasbaneyd inay marka hore iibiso ciyaaryahan si ay uhesho heshiis, iyadoo udhaqaaqeysa wakiilka bilaashka ah ee David Alaba .
Kounde, oo sidoo kale bartilmaameed u ah Paris Saint-Germain , kaasi 71 kulan u saftay Sevilla tan iyo markii uu kaga soo biiray Bordeaux bishii July 2019.